त्यहीँ ब्याक्ती धार्मिक हो, जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्नु सक्छ – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today १८ माघ २०७७, 9:51 am
यदी कसैलाई चिन्नु छ भने स्वयम् आफैंले उहीँ ब्याक्तीसंग प्रत्यक्ष संगत गर्नुहोस्, अरुको कुरा सुनेर कसैप्रती धारणा बनाउनु ठुलो मुर्खता हो !
त्यहीँ ब्याक्ती धार्मिक हो, जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्नु सक्छ!
एउटा साचो मानवले कसैलाई पनि घृणा गर्नु सक्दैन !
जिन्दगी बिश्वासले हैन साहसले जिउनु पर्छ,यहाँ बिश्वास ,राेक्ने भन्दा साहस राेक्नेहरु प्रसस्त भेटिन्छन् !
मान्छे ठुलो होस् या सानो होस् यदि मान्छेको व्यबहार र बोलिमा मिठास छैन भने मान्छे त के पशुले पनि फर्केर हेरदैन
मानिस बिहान् देखी बेलुका सम्म काम गरेर त्यति धेरै थाक्दैन ,जति धेरै चिन्ता र क्रोधले एक क्षणमै थाक्ने गर्छन् !
झरेको आसु त केवल केहि समयको मन शान्त्वनाको लागि मात्र हो। तर मन दुखेको पिडा सधैंभरि मनमा बल्झि रहन्छ !
जो मान्छे आवस्यकता भन्दा बढी हास्छ नि त्यो संझनुहोस् चाहनाले होइन बहानाले मुस्कुराएको हो म जस्तै सच्चा आत्माले बहाना बनाउन सक्दैन!
जिन्दगीमा खुसीको रंगहरु भर्नुलाई ठुलो घर होइन ठुलो मनको जरुरी पर्छ!
शंका आफैमा एउटा यस्तो जलन हो, बिस्वासनै मान्छेको यस्तो एउटा मलम हो,बिश्वास हुनु साथ निको हुन्छ!
ईश्वर भगवान जताततै मिल्दैन त्यसैले आमा र बाबुलाई मानेको हुन्!
यदी कसैलाई गुननै लगाउछौ भने जिन्दगीभर उसले कहिल्यै पनि नबिर्शिने गरि गुन लगाउ, होइन भने मुटुनै चर्किने गरि तितो गुन र चर्को बोलीले मुटुलाई टुक्राटुक्रा नबनाउ!
मानिसलाई जन्म र मृत्युको बेलामा सबैले सब भन्दा धेरै मायाप्रेम गर्छन् बाकी समयमा आफैले सरलतारूपमा व्यावसायिकता ब्यबस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ!